Imibukiso engama-30 ehamba phambili yaseBrithani ku-Amazon Prime 2021 - Ukuzijabulisa
Imibukiso engama-30 ehamba phambili yaseBrithani ku-Amazon Prime, kusukela ku-'Luther 'kuya ku-'Downton Abbey'
30 Best British Shows Amazon Prime
Enye yezindlela ezinhle kakhulu zokudlulisa isikhathi (ngaphandle kokufunda imidanso yeTikTok, kunjalo) yimidlalo ye-TV yokubuka kakhulu. Uma singabhekile ngokungenamahloni IHhovisi Okwesikhathi sesigidi, khona-ke mhlawumbe singene shí emibukisweni emisha yokulutha efana Umzila Wenkanyamba noma I-WandaVision. Kepha manje, njengoba sesigcwaliswe ngokuqukethwe okuphoqayo kwaseMelika, sibheke ukunonga umugqa wethu ngezihloko ezithile zomhlaba wonke, noma ngabe umbukiso wokupheka , i-sitcom yakudala noma okwesabisayo imfihlakalo yokubulala .
Ngakho-ke ngokwemvelo, sinqamule i-Atlantic ukuthola imibukiso emihle kakhulu yaseBrithani ku-Amazon Prime njengamanje. Indaba ende? Ulayini wethu usuvele uphindwe kabili ngobude. Bona izihloko ezingama-30 ezifanele kakhulu ukuzitika ngocansi, kusuka ULuther uku UDownton Abbey .
OKUSHIWO: Imibukiso engu-17 Yemibukiso Engcono Kakhulu yaseBrithani kuNetflix Njengamanje
Lungiselela ukubona olunye uhlangothi luka-Idris Elba kulo mdlalo othinta ubugebengu bengqondo. Lo mlingisi waseBrithani udlala indawo kaDetective Chief Inspector uJohn Luther, osebenzela iSerious Crime Unit eLondon. Yize aziwa ngokuzinikela kwakhe, uLuther uvame ukudliwa ngamacala akhe futhi abe ngothanda ngokweqile, aze afike nodlame. I-BTW, indima ka-Elba yamzuzela iGolden Globe Award, iScreen Actors Guild Award futhi ezine Ukuphakanyiswa kuka-Emmy.
Uyamthanda uSherlock Holmes? Bese uhlangana nomphenyi wakho omusha oyintandokazi, u-Endeavor Morse (uShaun Evans). Setha phakathi nama-60s kanye nama-70s e-Oxford, eNgilandi, lokhu Umhloli Morse Ukuqothula kulandela umseshi odumile njenge-rookie ekuqaleni komsebenzi wakhe. Lolu chungechunge oluhehayo luzokugcina uqagela kuze kube sekupheleni.
izimo eziphambili kakhulu ze-yoga
3. 'Udokotela Ngubani'
Ngaphambi kwemvuselelo kaChristopher Eccleston ethandwayo ngo-2005, kwakukhona okwakudala Udokotela Ngubani, eyaqala ukusakazwa ku-BBC ngo-1963. Umbukiso ugxile ku-Time Lord onamandla oqala ama-adventures amaningi esebenzisa umshini wesikhathi eyebiwe. Thatha uhambo olubuyela emuva ekuqaleni kwe-franchise edumile, lapho uWilliam Hartnell adlala khona njengo 'Dokotela' wokuqala.
4. 'Amabika Amahle'
Akumangalisi ukuthi lo mbukiso ulinganiswe izinkanyezi ezinhlanu ku-Amazon Prime. Ngokuya ngencwadi yamaphupho kaTerry Pratchett noNeil Gaiman enegama elifanayo, lolu chungechunge lwamahlaya lulandela ingelosi u-Aziraphale (Michael Sheen) kanye nedimoni uCrowley (David Tennant), abahlanganyela ukuvimbela ukuza komphikukristu futhi bavikele uMhlaba kunqwaba enkulu inhlekelele.
ngaso sonke isikhathi ama-movie wothando we-hollywood
5. 'IDownton Abbey'
Kusethwe ekuqaleni kwekhulu lama-20, le nkathi yedrama ilandela abakwaCrawleys, umndeni wezicukuthwane ohlala endaweni eqanjiwe yezwe laseYorkshire eDownton Abbey. Njengoba ilandela impilo yabo yansuku zonke, ibuye iveze umthelela wezehlakalo ezinkulu zomlando, kufaka phakathi iMpi Yezwe I kanye nokucwila kweTitanic. Uchungechunge oluhlonishwe ngokujulile luthole izindondo ezingaphezu kweshumi nambili, okubandakanya neGolden Globe Award yeBest Miniseries kanye ne-Emmy Award for Outstanding Miniseries.
6. 'UGavin noStacey'
Umdidiyeli nomlingisi uJames Corden kumane kuyintokozo kule sitcom ye-BBC, kanjalo nalabo asebenza nabo. Umbukiso ugxile ebudlelwaneni bukaGavin Shipman (Mathew Horne) noStacey Shipman (Joanna Page), futhi njengoba uqhubeka, imindeni yabo (ehluke kakhulu) iyahlanganiswa. Khonamanjalo, uCorden udlala umlingani omkhulu kaGavin, uSmithy, noRuth Jones abalingisa njengoNessa Jenkins. Sithembe uma sithi uzothandana nalezi zinhlamvu ezi-quirky, ezinamandla.
7. ‘Unogada Wasebukhosini’
Abagxeki kungenzeka ukuthi kabazange bahlabeke umxhwele ngalesi sitcom, kodwa bafo, kuzokuthinta ngokungathi sína ukungapheli. Unogada Wasebukhosini Ulandisa ngokufika kukaCaptain Guy Hubble (David Jason), owayengunogada ophenduka iRoyal Bodyguard ngemuva kokusindisa impilo yeNdlovukazi ngesibindi (noma kunjalo).
8. 'Uhambo Olukhulu'
It has amahlaya British, adventure futhi zonke ozithandayo car buff, car racing. Joyina ababambiqhaza uJeremy Clarkson, Richard Hammond noJames May njengoba beqala uhambo lomhlaba jikelele futhi behamba ngezimoto ezinhle ezivela emhlabeni wonke.
Kususelwa kuJames Runcie Izimfihlakalo zaseGrantchester, eGrantchester Ulandela u-vicar wase-Anglican uSidney Chambers (James Norton), owakha ubudlelwano obungenakulindeleka no-Detective Inspector Geordie Keating (Robson Green) ukuze axazulule uxhaxha lwamacala okubulala. Ngaphandle kwaseNorton, uTom Brittney ubuye abonakale njengolandela umlingiswa wakhe, uWill Davenport, ngemuva kwesizini yesine.
10. 'Kubi impela'
UJennifer Saunders noJoanna Lumley badlala indawo ka-Eddy Monsoon noPatsy Stone, abesifazane ababili abaphuza ngokweqile abafuna kakhulu ukuphinda babambe ubusha babo nokwenza ngcono isimo sabo senhlalo. I-sitcom iphinde idlale uJune Whitfield njengomama ka-Eddy oklolodelayo, uJane Horrocks njengomsizi onobuhlakani noJulia Sawalha njengendodakazi ka-Eddy engenangqondo.
11. ‘Ubufakazi Obuthule’
Iqiniso elijabulisayo: Lolu chungechunge lwezigebengu eziluthayo lwaqala ukukhishwa ngo-1996, futhi manje, ngaphezu kwezinkathi ezingama-23 kamuva, lubhekwa njengedrama yobude becala edlula yonke emhlabeni njalo . Umbukiso ulandela ithimba lochwepheshe bezifo ezihlola izifo njengoba bephenya ngamacala amaningi, kusukela ekubulaweni kuya ekushayweni ngokomzimba.
Lapho uRoss Poldark ebuyela ekhaya ngemuva kokulwa eMpini Yezinguquko yaseMelika ngo-1783, akakutholi ukwamukelwa okuhle kakhulu. URoss uthola ukuthi indlu yakhe isibhidlikile nokuthi uthando lwempilo yakhe luhlela ukushada nomzala wakhe. Yize kunjalo, uzimisele ngokwakha kabusha impilo yakhe — futhi angathola ithuba lesibili kwezothando ngenkathi ekulo.
amafilimu amasha wothando hollywood
Ikhuthazwe ngumdlalo wowesifazane oyedwa kaPhoebe Waller-Bridge ka-2013, lo mdlalo omnyama ugxile ku-'Fleabag '(Waller-Bridge), intokazi ekhululekile enentukuthelo nosizi eLondon yanamuhla. Uchungechunge luzuze iWaller-Bridge eziyisithupha Ama-Emmy Awards kanye neBritish Academy Television Award ye-Best Female Comedy Performance.
14. 'Umugqa Womsebenzi'
Ku- Umugqa Womsebenzi , U-Detective Sergeant Steve Arnott (Martin Compston) uyisikhulu esigunyaziwe esedluliselwa ophikweni Olulwa Nenkohlakalo ngemuva kokuthi yena nethimba lakhe bephule umthetho ngephutha, nokuholele ekufeni komphakathi ongenacala. Uchungechunge luthole umklomelo weRoyal Television Society Award kanye neBroadcasting Press Guild Award yeBest Drama Series.
Abangane ihlangana Seinfeld kulo mdlalo wamahlaya waseBrithani, ngaphandle kokuthi kuningi kakhulu. Lolu chungechunge lugxile ezimpilweni zothando zabangani abayisithupha (abesifazane abathathu nabesilisa abathathu) abakwiminyaka yabo yokuqala engama-30, futhi azishodi izikhathi ezihlazo. UJack Davenport, uSarah Alexander noGina Bellman badlala kule comedy ekhumbulekayo.
16. 'IDurrells eCorfu'
Ama-Durrells (obeye aziwe njengo AmaDurrells eCorfu ) ngumdlalo wamahlaya osuselwa kumbhali kanye nesipiliyoni sangempela semvelo uGerald Durrell nomndeni wakhe esiqhingini saseGrisi iCorfu. Ngemuva kokushona kukayise, silandela umama wakhe nawo wonke umndeni njengoba belwa nezinkinga zezezimali futhi bezivumelanisa nesiqhingi.
Hlanganisa umlando othile waseBrithani ngokulandela ukuxhashazwa kwendodana yesibili kaRichard IV, u-Edmund Blackadder, uMbusi wase-Edinburgh (uRowan Atkinson). Kuyaqapheleka ukuthi lo mbukiso uvame ukubalwa phakathi kwezindawo ezihamba phambili zaseBrithani zaso sonke isikhathi. Eqinisweni, ngo-2000, iBritish Film Institute yabeka lolu chungechunge kwabangu-16 ohlwini lwabo lwezinhlelo eziyi-100 ze-Greatest British Television.
18. 'Wena, Mina Nabo'
Ngaphandle kwegebe labo leminyaka engama-26, uLaren (Eve Myles) no-Ed (Anthony Head) bangamakhanda phezu komunye nomunye. Kepha kunenkinga eyodwa nje: Imindeni yabo iyilo hhayi ngijabule ngakho. Ukwenza izinto zibe zimbi kakhulu, owayengunkosikazi ka-Ed, uLydia (Lindsay Duncan), ungena kabusha empilweni yakhe futhi uzama ukuvusa uthuthuva. Ngabe ukuthandana kwabo kungamelana nayo yonke le drama?
i-baking soda ngenzuzo ebusweni
19. 'IBrithani Elincane'
Cabanga NgoMgqibelo ebusuku , kodwa inguqulo yaseBrithani. Lolu chungechunge lomdwebo wamahlaya lubandakanya abalingiswa abaningana abangama-quirky nama-parody ahlekisayo wabantu abadumile baseBrithani. Futhi uma udidekile ngesihloko, IBrithani encane empeleni kuyireferensi ehlakaniphile ethemini iLittle Englander, evame ukusetshenziselwa ukuchaza labo abangabokufika noma abanomqondo omncane.
Umuntu we-TV uJames May ufingqa kahle lolu hlelo ngomugqa wakhe wokuqala: Angikwazi ukupheka… Siyakwamukela ohlelweni lwami lokupheka. Kulolu chungechunge oluhlekisayo, uMay uzama isandla sakhe ekulungiseleleni izitsha ezahlukahlukene, kusuka kuma-pastas amnandi kuya kuma-dessert. Umphumela wokugcina awuhle njalo, kepha ngasohlangothini olukhanyayo, kuzokwenza uzizwe ungconywana ngokupheka kwakho kwehluleka.
21. 'Ngaphakathi Claridge's ’
Uyemukelwa e-Claridge's, ihhotela likanokusho, elinezinkanyezi ezinhlanu eliseMayfair, eLondon. Kulolu chungechunge lwama-documentary, bheka ngemuva kokusebenza kwangaphakathi kwalesi sikhungo esihle, esivakashelwe abasebukhosini nosaziwayo abaningi.
Abathandi bemfihlakalo yokubulala, lena ingeyakho. Akukhohliwe izikhungo zomhloli omkhulu wabaseshi uCassie Stuart (Nicola Walker) noSunny Khan (uSanjeev Bhaskar), abasebenza nethimba labo labaseshi ukuxazulula amacala okubulala nawabantu abalahlekile. Uchungechunge alugcini ngokufakwa izinsolo, kodwa futhi lunabalingisi abahle.
23. 'Isonto Elibi Kunazo Zonke Ekuphileni Kwami'
UWoward Steel (Ben Miller) nengoduso yakhe, uMel (Sarah Alexander), balungiselela ukubopha ifindo likasofasilahlane, kodwa okwenzeka esontweni elingaphambi komshado wabo yiphupho elibi kakhulu labo abashadile. Inhlekelele ibonakala ilandela uHoward yonke indawo lapho eya khona, kusukela ekubulaleni ngephutha inja yabasekhweni lakhe kuze kube ukulahlekelwa yindandatho yomshado.
24. ‘I-London Irish’
Le sitcom ilandela uBronagh Lynch (uSinead Keenan), uConor Lynch (uKerr Logan), uPacky Kennedy (uPeter Campion) noNiamh Rafferty (Kat Reagan), abangani abane abasondele eminyakeni engama-20, njengoba bezama ukuhamba impilo yaseLondon. Uma ubuthandile Lihlala Libalele ePhiladelphia , lapho-ke ILondon i-Irish izolunga i-alley yakho.
25. ‘Isidlo sakusihlwa sangoLwesihlanu’
Ikhuthazwe ngumlando wobuJuda womdali uRobert Popper, Isidlo sasebusuku sangoLwesihlanu kulandela abakwaGoodmans, umndeni wamaJuda ophakathi nendawo, njengoba bezama ukudla isidlo sabo seSabatha ngoLwesihlanu ebusuku. Ngeshwa, lawa ma-dinner kude kusuka bushelelezi.
26. ‘Imenyu Enkulu yaseBrithani’
Ungakucabanga ukuthola ukuphekela indlovukazi isidlo esikhethekile sokuzalwa? Yebo, yilokho kanye abangenele ukuncintisana nabo kwisizini yokuqala Imenyu Enkulu yaseBrithani. Sanelisa ukunambitheka kwakho ngalombukiso omnandi wokupheka njengoba abapheki abaphezulu baseBrithani beya ekhanda ukuze bathole ithuba lokupheka inkambo eyodwa yedili lezifundo ezine.
Uma izindaba zentsha kanye nezindaba zokuza eminyakeni yobudala ziyinkomishi yakho yetiye, cabanga ke Abaphakathi , okulandela impilo kaWill McKenzie (Simon Bird). Ngemuva kokudivosa kwabazali bakhe, uWill uzodluliselwa eRudge Park Comprehensive, lapho eba ngumngani kaSimon Cooper (uJoe Thomas), uNeil Sutherland (uBlake Harrison) noJay Cartwright (uJames Buckley). Lolu chungechunge lubhekana nezihloko ezimbalwa ezibalulekile, njengokubopha abesilisa, ezocansi kanye nempilo yesikole.
uhlu lwamafilimu othando
28. ‘Amabhange eDCI’
Ngokususelwa kumanoveli ombhali wobugebengu uPeter Robinson u-Alan Banks, lolu chungechunge lwedrama lulandela uMhloli Omkhulu Womphenyi onenkani ogama lakhe lingu-Alan Banks (uStephen Tompkinson) njengoba esebenza nabasizi bakhe ukuxazulula amacala angaqondakali okubulala. Lindela ukusonta okuningi nokujika okuzokugcina onqenqemeni lwesihlalo sakho.
29. ‘Ihlazo Elibi NgesiNgisi’
Le drama yamahlaya ehehayo ingukulingiswa okulingiswa kwehlazo lempilo yangempela elizungeze uJeremy Thorpe ngesikhathi sama-70s. Ngokususelwa encwadini kaJohn Preston yalelo gama, uchungechunge lwe-anthology luchaza izehlakalo eziholela ekuhlakalweni okuphela komsebenzi. Abalingisi bahlanganisa uHugh Grant, uBen Whishaw noClaire Foy.
30. ‘Ubukhulu Bayo’
Ngenkathi ngikhuluma no I-BBC , U-Armando Iannucci, umsunguli wohlelo, uchaze lolu chungechunge njengo ' Yebo Ngqongqoshe ihlangana ULarry Sanders, 'unikeza ukulingana okuphelele kwamahlaya kanye namaqiniso. Ukubhuqa kwezepolitiki ngokuvamile kukhuluma ngokuthi uhulumeni waseBrithani usebenza kanjani, kufaka phakathi izingqinamba ezivamile phakathi kosopolitiki kanye nendima yabezindaba.
OKUSHIWO: Ukuzidela okufanelekile kwe-BBC TV kukhombisa ukuthi ungasakaza empeleni e-U.S.
ama-movie aphezulu angama-20 othando e-hollywood
amakhekhe amahle kakhulu wezingane
omama usuku umyalezo funny
umfazi omuhle waseKorea movie
acupressure amaphuzu okuphumuza kwengqondo